Ego - Ọrụ Iwu Iwu nke Prairie
Ndị otu dị iche iche, ụlọ ọrụ, ndị mmadụ n'otu n'otu, na ụlọ ọrụ gọọmentị na-akwado Prairie State Legal Services na-enye ntọala siri ike maka nzukọ anyị ịchọ nnweta nnabata ikpe ziri ezi maka obodo anyị kachasị nwee nsogbu.
Obodo Prairie na-enyocha nnukwu nyocha nke onwe kwa afọ dịka usoro nyocha nke gọọmentị US n'okpuru Office of Management and Budget Circular A-133 na Iwu Ọrụ Corporation Iwu. Prairie State na-edepụta ụdị IRS dị ka 990 kwa afọ. Steeti Prairie nwere obi ụtọ na ha nweta akara ngosi kpakpando nke 4 site n'aka Charity Navigator na Platinum Seal of Transparency si GuideStar.
ỌT RT F AKW FKWỌ AKWINKWỌ AKW .KWỌ
Nkwupụta ego 2020
2020 Ụdị 990
AK REKỌ KWA Afọ
Akụkọ Afọ 2019
Akụkọ Afọ 2018
Akụkọ Afọ 2017
Akụkọ Afọ 2016
Akụkọ Afọ 2015
Akụkọ Afọ 2014
Anyị nwere obi ụtọ ịbụ akụkụ nke oflọ Ọrụ Enyemaka Iwu nke Illinois (IL-AFLAN), nke na-enye enyemaka ndị ọka iwu na-akwụghị ụgwọ maka ndị otu na-enweghị ego, ndị agha, ndị agha ochie, na ezinụlọ ha. Gị bit.ly/3s0Fljf ịmatakwu banyere netwọk a dị egwu nke nzukọ.	... Lee MoreLee obere